Abenzi be-Acoustic Panel nabaphakeli - China Acoustic Panel Factory
Indwangu iphaneli ye-acoustic
Ngokhuni panel acoustic
Iphaneli ye-polyester acoustic
Iphaneli yoboya bezinkuni
Izinto Zokungenisa Umsindo
IMisa elayishwe i-vinyl
Idokodo elingenawo umsindo
Isicabha esingenawo umsindo
Izinto Zokuvikela Umsindo
Amakilasi & Izikole
Ihhotela nezindawo zokudlela
Ulwazi lokuhlukanisa umsindo
I-Acoustic treatment bass trap
Ibhodi le-Acoustic, ibhodi elizwakala umsindo, ukwahlukaniswa komsindo pa ...
Ukulenga amaphaneli we-acoustic, intengo yephaneli ye-acoustic, umsindo ...
Amafu ophahla, iphaneli ye-acoustic emisiwe
Izinkuni zokwandisa izitudiyo
Ukwehliswa koboya bezinkuni, iphaneli yokhuni i-acoustic, ukhuni ...
IMisa elayishwe i-vinyl 2lb, isithiyo se-vinyl
Isithiyo se-Acoustics, amakhethini we-acoustic, ingubo ye-acoustic
Ikheli: Indawo Yezimboni, Isikhungo seBaoYunda, iXixiang Road, iXixiang Idolobha, Isifunda saseBaoan, iShenzhen, China.
Igumbi Lezinkundla Iphaneli ye-acoustic
Iphaneli le-acoustic perforated lenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-MDF borad futhi inemisebenzi evelele yezemvelo, ilangabi elisebenza futhi elingangenisi manzi. imibala ehlukahlukene nokuqedwa kokukhetha kunganelisa zonke izidingo zamakhasimende nezokumemezela. uma kuqhathaniswa ne-grooved acoustic panel, iphaneli elenziwe ngokhuni linomthelela ongcono kakhulu ekusebenzeni.
Eco Ceiling And Wall Acoustic panel izinkuni
Izinkuni zephaneli le-Acoustic zenziwe nge-MDF borad esezingeni eliphakeme futhi inemisebenzi evelele yezemvelo, ilinda ilangabi nemisebenzi engenawo amanzi. imibala ehlukahlukene nokuqedwa kokukhetha kunganelisa zonke izidingo zamakhasimende nezokumemezela. uma kuqhathaniswa ne-grooved acoustic panel, iphaneli elenziwe ngokhuni linomthelela ongcono kakhulu ekusebenzeni.
Amapaneli wokhuni omunca umsindo we-MDF
Amapaneli we-MDF okhuni enziwe ngebhodi ephezulu ye-MDF. Ngokusho kwe-acoustic nokuhlobisa ikhasimende, iphaneli yethu ye-acoustic yamapulangwe ingafakelwa umsebenzi ovelele wezemvelo, ilangabi elisebenza futhi elingenamanzi, ngisho nemibala ehlukahlukene nokuqedela ukukhetha.
Izinkuni ophahleni panel, izinkuni acoustic
Ipulangwe lezinkuni elenziwe ngokhuni, izinkuni ze-acoustic yindawo engaphambili, isike iphaneli le-peronated material resonance elinokusebenza okuhle kwe-acoustic okuhle. Isetshenziswa kabanzi ekuhlobiseni indlu nasekubonisweni kwamawindi wezohwebo. Ngaleli phaneli, singaphila endaweni eqhathanisekayo engasilethela izinjabulo ezikhululeke kakhudlwana. Igumbi elinaleli phaneli liphinde libonise ukunambitheka okuphezulu komnikazi.
Ingaphakathi le-mdf Timber acoustic panel
Iphaneli le-acoustic le-Timber liyisakhiwo sangaphambili, lisike iphaneli le-peronated material resonance elinokusebenza okuhle kwe-acoustic okuhle. Isetshenziswa kabanzi ekuhlobiseni indlu nasekubonisweni kwamawindi wezohwebo. Ngaleli phaneli, singaphila endaweni eqhathanisekayo engasilethela izinjabulo ezikhululeke kakhudlwana. Igumbi elinaleli phaneli liphinde libonise ukunambitheka okuphezulu komnikazi.
Ukwehliswa koboya bezinkuni, iphaneli le-acoustic yokhuni, uboya bezinkuni
Ukwehliswa koboya bezinkuni, iphaneli yokhuni i-acoustic panel, uboya bezinkuni manje sebungumholi esigabeni semikhiqizo ye-acoustical-panel ebiza kahle, esebenza kahle. Lezi zinhlaka ze-fiber fiber acoustic zisebenza kahle ngokumunca umsindo ngenkathi zivikela ngokushisa; ngokwemvelo, uvolo we-acoustic ulula ukukhiqizwa; namaphaneli ayatholakala ngosayizi nemibala ehlukahlukene engahle yakhelwe ukulingana cishe noma yikuphi ukuhlobisa.
Lezi zinhlaka ze- fiber cementitious wood cementitious fiber azigcini nje ngokubhebhethekisa igumbi elinokuhlukahluka kokuklama, kepha amapaneli woboya bezinkuni acoustic abuye anciphise ukubuyisana nokuvuselelwa kabusha ngokumunca umsindo. Amabhodi woboya bezinkuni angaguqula ubuhle nobuciko bendawo yanoma iyiphi indawo yangaphakathi.
Izinkuni zoboya besimende, izinkuni zoboya bezinkuni, izingodo zoboya bezinkuni
Ibhodi lesimende lesikhumba sokhuni, ibhodi loboya bokhuni, amapuleti wokhuni wokhuni lwenziwa kusuka ku-65% fiber fiber yemvelo poplar exutshwe nosimende we-portland ongu-35%, onezici zokuzwakala kahle nokuhlobisa. Isitayela sokuhlobisa sesimanjemanje sephaneli likasimende likasimende usimende sinelisekile ngabantu abaningi. Kukhona uhlobo lombala olungakhethwa, ishadi lombala leVinco linikezwa ireferensi yakho. Usimende lokhuni acoustic iphaneli isetshenziselwa inkomba ihholo, ihholo lombukiso, igumbi lomhlangano.
Okuhlobisa ama-wall wall 3d, i-acoustic soundproof, udonga lwe-acoustic
Le phaneli ye-Acoustic yenziwe nge-100% polyester fiber. Lokhu okubhaliwe kungabuye kusetshenziswe kabusha ngo-100%. Iqinile, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyicubungula, ingenziwa ngezimo ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene. Imininingwane elandelayo iphaneli ejwayelekile ye-acoustic lapho singasika khona noma yikuphi ukwakheka ngokwezifiso ngenxa yezidingo zamakhasimende.
Iphaneli ye-Acoustic yokuvimbela umsindo, i-acoustic wall tile, i-acoustic wall panel
ukuncishiswa komsindo ngobuningi obuphezulu
i-polyester fiber yenziwe njenge-cocoon shape shape ngobuchwepheshe obushisayo i-coefficient yokulinganisa umsindo ophakeme kakhulu efinyelela ku-0.9.
ukuthungwa kwempahla yemvelo kutholakala ngemibala ehlukahlukene yesimanje isitayela sokuhlobisa esilula.
Iphaneli yokungenisa, iphaneli ye-acoustic engu-3d, izinto zokumunca, amaphaneli odonga angenawo umsindo
Ukuncishiswa komsindo ngobuningi obuphezulu.
I-Polyester fiber yenziwa njengokuma kukakotini we-cocoon ngobuchwepheshe obuphezulu kushisa inani lokulinganisa lokulinganisa eliphakeme kakhulu lifinyelela ku-0.9.
Ukuthungwa kwempahla yemvelo kutholakala ngemibala ehlukahlukene yesimanje isitayela sokuhlobisa.
Izindawo ze-Acoustical, iphaneli eludongeni le-3d, amathayili we-acoustic, iphaneli lokumunca i-acoustic
Izindawo ze-Acoustical, i-3d wall panel, amathayili we-acoustic, iphaneli yokumunca i-acoustic yenziwa kusuka ku-100% polyester, ngokucutshungulwa kwenaliti. Inqubo yokukhiqiza isebenza ngokuphelele ngokomzimba nangokwemvelo, awekho amanzi angcolile, ukukhishwa, imfucuza,. akukho okunamathelayo, Isimo se-porous sephaneli ye-acoustic siyenza izwakale njenge-insptive & thermal insulative.
Amapaneli wethu we-PET acoustic Angena-toxic, non-allergenic, angacasuli futhi aqukethe ama-formaldehyde binders futhi anomsindo omkhulu (NRC: 0.85).
Igumbi le-Acoustic, izindwangu zodonga lwamapulangwe, izindwangu ezisongelwe ngamaphaneli we-acoustic, umsindo we-acoustic
Igumbi le-acoustic, izindonga zodonga lwendwangu, izindwangu ezigoqwe ngamaphaneli we-acoustic, umsindo we-acoustic unomsindo wokumunwa komsindo obanzi kanye ne-coefficient ephezulu yokumunca i-acoustic, nomphumela ongcono wokumunca umsindo kumvamisa ophansi, ophakathi naphakathi. Ukushisa okuphezulu ukumelana, ukumisa iqhwa, nokuguga, ukumelana yizici eziyinhloko zekhwalithi yendwangu ye-acoustic panel. Lezi zici zifeza ukusetshenziswa okuhlukahlukene kwendwangu ye-acoustic panel.
Izinga lokuvikelwa komlilo lifinyelela ezingeni likazwelonke B, futhi ukuvikelwa kwemvelo kuyizinga le-E1 likazwelonke. Ngokuzivumelanisa nezimo okuhle, indwangu ye-acoustic panel yenziwe ngezinto ezithambile.
I-Shenzhen Vinco Soundproofing materials Co, Ltd. is ezikhethekile izinto soundproofing iminyaka eminingi futhi ahlinzeke R & D, ukukhiqizwa, yokuthengisa futhi emva-sales service imikhiqizo.